Mbudzi protagonist yemabhuku. Mamwe mazita akakumikidzwa kumwedzi uno | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhema nhema
November, mwedzi wematsutso par kugona, iri protagonist yemamwe mazita yemanovelisi kubva kune akasiyana eras uye akasiyana kwazvo vanyori. Kubva pane novel nhema, dzazvino kana dzechidiki, Mbudzi inogara ichireva nharaunda yakapfuura kana yakanaka yenyaya yakanaka. Ngatitsvakei nyaya idzi.
1 Mazuva gumi nemashanu aNovember - José Luis Correa
2 Kwazvino muna Mbudzi - Hans Enrich Nossak
3 Mbudzi Gore - Hillary Ruben
4 Kate waNovember - Mónica Gutiérrez
5 Mbudzi - Jorge Galán
Mazuva gumi nemashanu aNovember - Jose Luis Correa
Posted in 2003, munyori José Luis Correa anotaurira nyaya ya Richard White, ane makore makumi mana nemana ekuberekwa, akakwanisa kutungamira hupenyu husina chinangwa muguta rake, Las Palmas de Gran Canaria, a mutikitivha agency. Komisheni iyo mukadzi akanaka anoita kuti aongorore iyo kuzviuraya yemukomana wake ichatora iye kupinda nyika mbiri sezvo anoyevedza sezvo vari ngozi. Bhawa uye husiku poto, kufamba uye mapato of the vana vakanaka kubva kuLas Palmas, uye iko kunyengera kunoreva mutengi wake.
Nguva pfupi yapfuura munaNovember - Hans Enrich Nossak
Basa remunyori wechiGerman uyu rakafananidzwa neiro ra Albert Camus, George Orwell kana mumwe wavo Günter Grass. Mumakumi matanhatu nemakumi manomwe nematatu enganonyorwa dzake dzinozivikanwa kwazvo dzakadudzirwa muchiSpanish, imwe yacho ndeiyi, kubva muna 1968. Muna 1961 akagamuchira Büchner mubairo, uye makore akazotevera aizotumidzwa zita Nhengo yeGerman Academy yeMutauro uye Zvinyorwa.
Iyi novel inoumbwa ne maganhuro matatu marefu. Pakutanga, protagonist inotaurira mumunhu wekutanga kuti akangoerekana afunga kutarisana nemunyori wepakati iya yaakanga achangobva kusangana nayo. Kufadzwa nehupombwe hwake, izvo zvisingagone uye kuzvidzora kwehunhu hunonzwisisika uye hwakakomberedzwa hwemukadzi wechibourgeois uye amai vemhuri inofara yaakatungamira vanobuda zvakare. Pasekondi chitsauko, mukukurukurirana kwenguva refu natezvara vake, vanomushanyira kuimba yake itsva yekugara, anorondedzera zvazvaireva kushamisika kwake kusanzwisisika uye kutadza kwe kusunungurwa kwake kunofungidzirwa.
Y pakupedzisira, zvakare kumba kwemurume wake, kune mamiriro akasimba kupfuura ake kuda anomutungamira kuti akwire zvakare mumotokari yemudiwa wake, ndiani aenda kunomutsvakira akadhakwa kumba kwake, uye mune maminitsi mashoma gare gare ivo vaviri vachawana rufu. Yake kuvaka, iri bhuku raionekwa seimwe yeiyo mabasa makuru ezvinyorwa zvemazuva ano, zvirinani kubva kuGerman.
Gore raNovember - Hillary Ruben
Yakatumirwa mukati 2002, iyi inoverengeka nezve kushinga, kuzvivandudza uye kuda mhuka. Inotiudza iyo nyaya ye konyek, mufudzi wechidiki kubva kurudzi rweMaasai, uyo anofungidzira zviuru zvezviitiko. Kusvikira rimwe zuva, achifudza boka pamwe nehama yake Parmet, anotambura iyo kurwisa kwevamwe varwi uye akuvara. Makunakuna anomusiya ndokudzokera kumusha, achiudza kuti Konyek atiza uye asiya mombe ega. Konyek anoita iyo tsvaga iye November Mbudzi yemhuru, yakarasika mushure mekurwiswa.
Mushure mezviitiko zvakawanda nenjodzi anomuwana uye, riini Dzokera kumusha, uchafanirwa kupfuura nekutongwa kwevakuru. Iwe uchakwanisa kuikunda nekuda kweushingi hwako uye njere Baba vake, mukuziva kukosha kwayo, inopa kuna Nube de Noviembre.
Kate waNovember - Monica Gutierrez
Yakatumirwa mukati 2016, ino novel iri yakagara muengland. Pausiku hwe a chando dutuNeChishanu kuseri kwepirate galleon bar yeyakavanzika bar, bartender akamirira kusvika kwaKate. Kate ndiye musikana ane anoshamisa anoyerera bvudzi uye iwo akareba marefu.
Kate anogara muchivakwa chekare. Zvave nenguva yakareba kubva zvaakatakurwa nemaitiro zvekuti haucharangariri pfungwa yezvidiki zvidiki kana zvakavanzika zviitiko pamatope anoshamisa ezuva nezuva. Bindu risinganzwisisike uye nhepfenyuro yakarembera kubva mudenga mune yemapuranga imba yepamusoro ndiyo nzvimbo yake yekupotera kudonha. Uye kunyangwe mutaundi diki reColeridge munhu wese achiregeredza yambiro ye eccentric meteorologist, nguva yave kuda kuchinja yaMbudzi yaKate mumaoko emurume nezvirongwa zvekutsiva.
Zvakare yakaburitswa muna2016, iyi inyaya inosimbisa kudiwa kwekusimudzira izwi rako, sezvakaita maJesuit akapondwa, mukudzivirira avo vanotambura. Muna 1989 iyo Nzanga yeSalvador anogara mukutyisa kwehondo yevagari vemo. Rimwe zuva raipa munaNovember mangwanani boka revarume vane zvombo inopinda muzvivakwa zveCatholic University uye inouraya vatanhatu veSpanish vaJesuit nevakadzi vaviri Kutonhora-ropa.
Mumazuva akatevera kuurayiwa, mutungamiriri mutsva wevaJesuit chete, baba Tojeira, yakazvipira uye yakazvipira ku tsvaga mhondi. Chapupu choga izvo zvinogona kubatsira kugadzirisa nyaya iri akanyarara nevakuru. Ndivanaani uye matsotsi anoteerera?
Tine mumaoko edu bhuku rakashinga rinoongorora iyo chokwadi chinoshamisa izvo zvakavhundutsa El Salvador neLatin America muna 1989. Izvo zvakare zvinopinda munhoroondo yemamwe mhosva, senge yeiyo Monsignor Romero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mbudzi protagonist yemabhuku. Mamwe mazita akakumikidzwa mwedzi uno